पूर्व मिस नेपाल अश्मिले सार्वजनिक गरिन् आफ्नो प्रेमी | Makalukhabar.com
पूर्व मिस नेपाल अश्मिले सार्वजनिक गरिन् आफ्नो प्रेमी
जेठ ९, काठमाडौँ । पूर्व मिस नेपाल अश्मि श्रेष्ठले आफ्नो प्रेमी समाजिक सञ्जाल ईन्स्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
उनका प्रेमी भारतीय गायक सनम पुरी रहेका छन् । उनले सनम र आफ्नो एक फोटो सामाजिक सञ्जाल ईन्स्टाग्राममा सेयर गर्दै आफु सनमकाे प्रेम रहेकाे खबर सावजनिक गरेकी हुन् ।
उनले उक्त सेयर गरेको फोटोको क्याप्सनमा लेखेकी छिन्, ‘यो मिठो सुरुवात मात्र होइन, यसपछिका थप मिठा पलहरुका लागि पनि ।’
उता उनकी प्रेमी भनिने चिनिने भारतिय गायक सनमले पनी आफ्नो इन्स्टाग्रामको अकाउण्डमा उक्त फोटो सेयर गरेका छन् । गायक सनमले आफ्नो सम्बन्धलाई आधिकारिक बनाउनका लागि त्यही फोटो एकै समयमा सेयर गरेका हुन् ।
उक्त सार्वजनिक गरिएको फोटोमा यी दुई जोडी एकअर्काको मायामा निकै खुशी भएको देखिन्छ । केही वर्ष अघी बिभिन्न मिडियाले अश्मिको पाइलट सृजन मानन्धरसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको खवरहरु बाहिर ल्याएका थिए । सृजन मानन्धर गोमा एयरका को पाइलट थिए र उनको २०७४ मा लुक्लामा हवाई दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो ।
अश्मि र सनमका जोडीलाई उनीहरुका फ्यानहरुले निकै रुचाएका छन् । उनका फ्यानहरुले उक्त सेयर गरिएको फोटोमा यी दुईको निकै प्रसंसा गर्नुको साथै शुभकामना समेत दिएका छन् ।
अश्मि सन् २०१६ की मिस नेपाल हुन् । उनका प्रेमी सनमले केही समय अगाडी मात्र नेपाल आएर लाइभ कन्सर्ट गरेका थिए । विशेषगरी सानमले गाएका पुराना गीतको कभर निकै चर्चित बनेका छन् ।
मोदीलाई बधाई दिँदै के भने प्रधानमन्त्री ओलीले ?
‘द स्काई इज पिंक’को प्रिमियरमा किन रोइन् प्रियंका ?
भाद्र २, भारत । प्रियंका चोपडा लामो समयपछि फिल्म द स्काई इज पिंकबाट बलिउडमा फिर्ता भइरहेकी छिन् । प्रियंकाले फिल्मको मज्जाले प्रोमोशन गरिरहेकी छिन् ।हालै टोरोन्टो फिल्म फेस्टिबलमा द स्काई इज पिंकको पहिलो प्रिमियर राखियो । यतिबेला प्रियंका चोपडासँग फरहान अख्तर र निर्देशक सोनाली बोस पनि उपस्थित थिए ।... जारी राख्नुहोस...
भाद्र २६, बिराटनगर । नोबेल शिक्षण अस्पतालको प्रायोजनमा यस बर्ष पनि ‘नोबेल मिस्टर एण्ड मिस थारु आईकन’ सञ्चालन भईरहेको छ । मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र झापाका ६ स्थानमा अडिसन सकेर अहिले बिराटनगरमा प्रतियोगिहरुको प्रशिक्षण चलिरहेको छ । यसअघि झुम्का, गाईघाट, दुुहबी, नेताचौक, विर्तामोड र बिराटनगरमा अडिसन गरेर... जारी राख्नुहोस...
दशैँमा बिराटनगरमा सबिन राईको ब्याण्ड आउदैँ
भाद्र २६, बिराटनगर । बेलायतको १८० वर्ष पुरानो विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी अफ वल्भरह्यामटनको साझेदारीमा संचालित चार वर्षीय इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट (बिबिएम) को ब्याचलरको कक्षा संचालन गर्दै आएको बिराटनगरको मेरिल्याण्ड कलेजले यस वर्ष दशैँ विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।कलेजका बिबिएम अध्यनरत ४... जारी राख्नुहोस...